Biden iyo Trump: Yaa qarka u saaran inuu ku guuleysto doorashada Mareykanka? | Warkii.com
Home warkii Biden iyo Trump: Yaa qarka u saaran inuu ku guuleysto doorashada Mareykanka?
Biden iyo Trump: Yaa qarka u saaran inuu ku guuleysto doorashada Mareykanka?
Biden ayaa ku horreeya Wisconsin, Michigan, iyo Nevada, halka Trump uu hoggaaminayo Pennsylvania, Georgia, North Carolina. Haddii labada musharax ay ku kala guuleystaan gobolladaas ay kala hogaaminayaan, waxaa madaxweyne noqonaya Biden, sababtoo ah Trump wuxuu u baahan yahay in ka sokow saddexda gobol ee uu hoggaaminayo inuu sidoo kale ku guuleysto mid ka mid ah saddexda uu Biden ku horreeyo.
Previous article Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur: “Wixii shalay dhacay waxay tijaabo u tahay Ra’iisul Wasaare ROOBLE”
Next articleMadaxweynaha Koonfur Galbeed oo ku dhowaaqay guddi doorasho